Sounds that can't hear and Thoughts that can't see: April 2012
Yin Sue | 6:51 AM | Pictures
Posted by Yin Sue at 6:51 AM4comments
Yin Sue | 7:30 AM | Photo Lovers
Posted by Yin Sue at 7:30 AM0comments
Yin Sue | 7:10 AM | Pictures
ရေးဆွဲ ပြီး၊ ခံစားရေးဖွဲ့ထားတာပါ.....ဒီပန်းချီကားလေးနဲ့ကဗျာလေးကို
Posted by Yin Sue at 7:10 AM3comments
Yin Sue | 9:35 AM | Photo Lovers
ကိုကျော်ဇောလေးရဲ့ဓါတ်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်....လိုချင်သောသူများ ကိုကျော်ဇောလေး kyawzawlay@gmail.com မှာခွင့်ပြုချက်လေးတောင်းပြီး ယူပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ....
Posted by Yin Sue at 9:35 AM7comments
Gotye - Somebody That I Used To Know .Ft - Kimbra ( Lyrics )
Yin Sue | 6:02 AM | English Songs ( With Lyrics )
ဒါကတော့ Gotye သီဆိုထားတဲ့ Somebody That I Used To Know ရဲ့ Lyrics လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်....ကျွန်တော်လို့ Listing Skill ညံ့တဲ့သူအတွက်တော့ Lyrics နဲ့နားထောင်ပါတယ်...ကိုယ့်ဂုဏ်ကို ဖော်တာပေါ့.....ဟီးးးး
Posted by Yin Sue at 6:02 AM0comments
Gotye - Somebody That I Used To Know ( Ft - Kimbra )
Yin Sue | 5:58 AM | English Songs
ဒီသီချင်းကတော့ Billboard မှာနံပါတ် ၁ နေရာယူထားတဲ့ Gotye ရဲ့ Original Songs လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်...ဒီမှာလည်း ဖန်တီးမှု့လေးတွေက အလန်းလေးပါဘဲ.....Kimbra က Feat ဆိုပေးထားပြီး
Posted by Yin Sue at 5:58 AM 1 comments
Walk off the Earth - Somebody That I Used To Know( Gotye - Cover )
Yin Sue | 5:46 AM | English Songs
Billboard ရဲ့ ထိပ်ဆုံးနံပါတ် ၁ နေရာကိုရပ်တည်နေတဲ့ Somebody That I Used To Know ဆိုတဲ့သီချင်းလေးပါ....Gotye ကသီဆိုထားပြီး အခုတင်ပေးထားတာလေးကတော့ Walk off the Earth အဖွဲ့သီဆိုထားတဲ့ Cover လေးဖြစ်ပါတယ်...ဂီတာတစ်လက်ကို ၅ ယောက်ဝိုင်းတီးပြီး ဆိုထားတာလေးဖြစ်လို့ ဖန်တီးမှု့လေးတွေကို သဘောကျတာနဲ့တင်ပေးတာပါ...နားထောင်ကြည့်ပါဦး...
Posted by Yin Sue at 5:46 AM 1 comments
Yin Sue | 5:39 AM | Jokes
တစ်ခါက လူသားစားတဲ့တောက လူရိုင်းသားအဖဟာ အိမ်မှာချက်ဖို့ အသားမရှိတော့တာနဲ့ မြီု့အစွန်နားအထိတက်လာကြတယ်။ တွေ့တဲ့သူကိုဖမ်းခေါ်လာပြီး ချက်စားဖို့ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ လူအရိပ်အခြေစောင့်နေတုန်း သူတို့နားကိုမိန်းမ ပိန်ပိန်တစ်ယောက်ဖြတ်လာတယ်။
သားကမေးတယ် - အဖေ အဲဒီမိန်းမကို ချက်စားရအောင် ဖမ်းသွားမလားဆိုတော့
အဖေက - နေဦး ဒီမိန်းမက ပိန်လွန်းတယ်။ အရိုးကြီးပဲ။ စားလို့မကောင်းဘူး။
သားကမေးတယ် - အဖေ ဒီတစ်ယောက်က ၀၀တုတ်တုတ်ကြီး စားလို့ကောင်းမယ်။ ဖမ်းသွားရအောင်။
အဖေကလည်း - ဒီတစ်ယောက်က ၀လွန်းတယ်။ ငါတို့စားလို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။
သားကလည်း - အဖေ ၊ ဒီတစ်ယောက်ဆို အနေတော်ပဲ။ ပိန်လည်းမပိန် ၀လည်းမ၀ဘူး။
အဖေကလည်း - ဟုတ်တယ်၊ ဒီတစ်ယောက်ကအတော်ပဲ။ ဖမ်းသွားရအောင်။
အိမ်ရောက်ရင်မင်းအမေကိုချက်စားကြတာပေါ့ သားရယ်တဲ့ …
Posted by Yin Sue at 5:39 AM 1 comments
Posted by Yin Sue at 6:14 AM0comments
Yin Sue | 11:33 PM | Jokes
ရွာတစ်ရွာမှာ ဦးခန့်၊ ဒေါ်ချော နဲ့ သားမောင်လူလှတို့ ရှိသတဲ့။ဦးလှဟာ တခြားကိစ္စတွေ မကြွားဝါတတ်ပေမဲ့ သူငယ်ငယ်က ဘယ်လိုစွံတာ၊မိန်းကလေးတွေ သူ့ကိုဘယ်လိုကြိုက်ကြတာ၊ ဘယ်သူဘယ်ဝါနဲ့ဘယ်လိုမလွတ်မကင်းဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုအရသာခံပြီးကြွားလေ့ရှိလို့
သူ့မိန်းမဒေါ်ချောကအမြင်ကပ်သတဲ့။သူတို့ရဲ့သားလေး မောင်လူလှက လူပျိုအရွယ်ရောက်လာတော့တောင်ဘက်ရွာကို လူပျိုလှည့်သွားဖို့ အဖေကို ခွင့်တောင်းတယ်။
အဖေ ။ ။ ဟေ့ ငါ့သား တောင်ဘက်ရွာဆို အဖေနဲ့ကင်းတဲ့သူမရှိတော့အကုန်လုံးက
မင့်နှမတွေဖြစ်တယ်ကွ ... ငရဲတွေကြီးကုန်ပါ့မယ်ကွာ -
သား ။ ။ ဒါဆို မြောက်ဘက်ရွာကို သွားမယ်အဖေ -
အဖေ ။ ။မြောက်ရွာလဲ အဖေနဲ့မလွတ်ဘူးငါ့သား ... အိုကွာ .. ပြောရရင် အရှေ့ရွာ
အနောက်ရွာတွေအကုန်လုံး .. အဖေ့ကိုကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့မိန်းမတွေချည်းပဲဆိုတော့ ...
သူတို့ရဲ့ သမီးတွေက.. .. မင်းနဲ့ဆိုမောင်နှမတော်တယ်ကွ ..မိုးကြိုးပစ်ပါ့မယ် ငါ့သားရယ် -
အဲဒီလိုကြားရတာတွေ နားကြားပြင်းကပ်လာတဲ့ ဒေါ်ချောက..သူ့သားကို လှမ်းအော်ပြောလိုက်တာကတော့
ဒေါ်ချော။ ။သွားသာသွား ငါ့သားရေ .. သားကြိုက်တဲ့ရွာကိုသာ လူပျိုလှည့် ...
မင်းအဖေပြောတာနားထောင်မနေနဲ့ ..မင်းကို သူနဲ့ရပြီးမွေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး -
Posted by Yin Sue at 11:33 PM5comments
Posted by Yin Sue at 7:56 AM2comments
Yin Sue | 4:27 AM | Jokes
ဒါပေမယ့် မင်းအတွက် ကိုယ် အနမ်းပေါင်း ၁၀၀ ပို့လိုက်တယ်နော်။ကြည်.ပြီးတော့
ကိုကို့ရဲ့ အနမ်းပေါင်း ၁၀၀ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လောက်လဲလောက်ငှပါတယ်။
၃။ အိမ်ပိုင်ရှင် ကတော့ အိမ်ငှားခ မယူ ပဲ တစ်နေ့ ကို အနမ်း ၂ ပွင့် ၃ ပွင့်လာယူတယ်
ဒါပေမယ့် မပူပါနဲ့နော် ချစ်မှာ အနမ်း ၃၅ ပွင့်ကျန်သေးတယ်။
ဒီလ တော့သုံးဖို.ကောင်းကောင်းလောက်ပါတယ်။နောက်လလည်း ဒါမျိုးလုပ် ရမှာပဲလားဟင်။
Posted by Yin Sue at 4:27 AM2comments
Ko Kyaw Win Htun - Golden Land - Pine Woods Kalaw (Selenium Tone )
Yin Sue | 9:17 AM | Photo Lovers
ကိုကျော်ဝင်းထွန်းရဲ့ ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်...လိုချင်သောသူများ ကိုကျော်ဝင်းထွန်း kyawinhtun@gmail.com ထံတွင် ခွင့်ပြုချက်လေးတောင်းပြီး ယူပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်...
Posted by Yin Sue at 9:17 AM3comments
The 100 Most Influential People In The World (Full List - Time Specials )
Yin Sue | 8:25 AM | Breaking News
Note - ပုံအကြီးချဲ့ရန် ပုံကို Click ပါ
ဒါလေးကတော့ Time Magazine ရဲ့ 2012 ရဲ့ကမ္ဘာ့အလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံး လူ အယောက် ၁၀၀ ကို
April 17 က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ပါတယ်.....Screen Shot နဲ့ရိုက်ပြီးတင်ထားပေးတာပါ.....
ကျွန်တော်တို့ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ကတော့ အဆင့် ၇၂ ဖြစ်ပါတယ်.....
ကြည့်ရတာ မရှင်းရင် ဒီမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်......
Posted by Yin Sue at 8:25 AM 1 comments
Yin Sue | 7:11 AM | Myanmar Songs
သူငယ်ချင်းတွေလည်း ဓါတ်ပုံတွေချည်းဘဲကြည့်နေရတာ ပျင်းနေလောက်ပြီနော်....အခုတလော စိတ်ရှုပ်နေလို့ ဘလော့ကိုလည်း သေချာမလုပ်နိုင်ဘူး....သူငယ်ချင်းတွေဆီကိုလည်း သိပ်မလည်ဖြစ်ဘူး....သီချင်းတွေဘဲနားထောင်ဖြစ်တယ်....အဲ့ဒါနဲ့ ဒီသီချင်းလေးကို အရမ်းကြိုက်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ...ဒီထဲကကောင်မလေးကဘယ်သူလဲတော့မသိဘူး....မော်လ်ဒယ်လား....
ဘယ်သူ့ကောင်မလေးလဲတော့မသိဘူး...သိတဲ့လူတွေပြောပြဦးနော်....တစ်ခြားသီချင်းတွေက ပုံတွေကအသေဖြစ်နေတာနဲ့ ဒါလေးဘဲတင်ပေးလိုက်တယ်....သီချင်းလေးကတော့ တော်တော်ကောင်းပါတယ်...နားထောင်ကြည့်ပါဦးနော်.....
Posted by Yin Sue at 7:11 AM3comments
Ko Aung Pyae Soe - My Eyes on Bagan - Early Morning Bagan !! - 1
Yin Sue | 7:04 AM | Photo Lovers
Posted by Yin Sue at 7:04 AM2comments
Ko Kyaw Win Htun - Golden Land - Shwedagon Pagoda viewing from Kandawgyi Lake
Yin Sue | 6:44 AM | Photo Lovers
Posted by Yin Sue at 6:44 AM 1 comments
U Myint Aung(iTSTAR) - Wal Photos - Taung Gyi Shan State
Yin Sue | 6:50 AM | Photo Lovers
Posted by Yin Sue at 6:50 AM2comments
Yin Sue | 7:01 AM | Poems
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း မအားလို့ ပုံတွေချည်းဘဲ တင်ဖြစ်နေတာကိုတောင် ငြီးငွေ့မသွားဘဲ လာပြီးအားပေးနေကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုရော ကျွန်တော့လို မအားလို့ မလာနိုင်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုရော အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်.....ဒီကဗျာလေးကတော့ ကျွန်တော့ရဲ့အချစ်ဆုံး မဟေသီလေးအကြောင်းကို ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးပါ....
သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ဒီကဗျာလေးနဲ့ မိတ်ဆက်လိုက်ပြီနော်....
အားလုံးကို ခင်တဲ့ ......ရင်ဆူး
အားငယ်တတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ငါမုန်းတယ်
အားငယ်တတ်တဲ့ မင်းက ဘာကြောင့်
ငါ့ရဲ့အချစ်ဆုံး ဖြစ်နေရတာလဲ ?
ကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ငါမုန်းတယ်
ကြောက်ရွံ့လွယ်တဲ့ မင်းက ဘာကြောင့်
အရှက်အကြောက်ကြီးလွန်းတဲ့ မင်းက ဘာကြောင့်
ငါကလည်း နင့်ရှေ့က တံတိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်
နင်ရိုးအလွန်းလို့ ပြသနာတက်တိုင်း ငါ့ကိုတိုင်တတ်တယ်
ငါကလည်း မျက်ရည်သုတ်ပြီး နှစ်သိမ့်ခဲ့ရတယ်
ငါကလည်း နင့်ရဲ့သူရဲကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရတယ်
နင်ရှက်ရွံ့တိုင်း ငါ့လက်မောင်းလေးကို ထုတတ်တယ်
နားလည်မှု့ရှိသော နှလုံးသား ၂ စုံ ထပ်တူညီခြင်းသာ ဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့် မင်းဟာ ငါ့ရဲ့ အချစ်ဆုံး ဖြစ်နေခြင်းသာ........
Posted by Yin Sue at 7:01 AM 20 comments
U Myint Aung (iTSTAR) - Wall Photos - Bagan Myanmar
Yin Sue | 4:40 AM | Photo Lovers
Posted by Yin Sue at 4:40 AM2comments
Ko Kyaw Win Htun - Golden Land - Vineyard @ Aye Thar Yar
Yin Sue | 5:53 AM | Photo Lovers
Posted by Yin Sue at 5:53 AM7comments
Yin Sue | 6:37 AM | Photo Lovers
Posted by Yin Sue at 6:37 AM4comments
Yin Sue | 3:54 AM | Photo Lovers
Posted by Yin Sue at 3:54 AM4comments
Yin Sue | 8:03 AM | Photo Lovers
Posted by Yin Sue at 8:03 AM4comments
Ko Kyaw Win Htun - Golden Land - Karaweik Royal Barge
Yin Sue | 5:44 AM | Photo Lovers
Posted by Yin Sue at 5:44 AM3comments
Yin Sue | 4:48 AM | Photo Lovers
ကိုဇာနည်ဟိန်း၏ ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်.....လိုချင်သောသူများ ကိုဇာနည်ဟိန်း (danielhein1999@gmail.com)
ထံတွင် ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီး ယူပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်....
Posted by Yin Sue at 4:48 AM3comments
Vote Myanmar's President U Thein Sein for the 2012 TIME Top Roll
Yin Sue | 2:44 AM | Breaking News
ဒီလင့်ခ်ကတော့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကို ပေးရမဲ့ လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်...
ကျွန်တော်တို့သမ္မတကြီးကို Vote ပေးလိုက်ကြရအောင်....
April6မှာပိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် လက်မနှေးလိုက်ကြပါနဲ့.....
2012 Time 100 Roll စာရင်းကိုတော့ မှာ ကြေငြာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်....
ဒီနေ့ မှာ သမ္မတကြီးက 49 နေရာကို ရောက်နေပါပြီ...
အောက်ကပုံကတော့ သမ္မတကြီးကို Vote ထားတဲ့အရေအတွက်ပါ....
ဘယ်သူကမှခိုင်းလို့ မဟုတ်ဘူးနော်....ကိုယ့်သမ္မတကို လေးစားလို့ ...
ကို့သမ္မတကို မြန်မာနိုင်ငံသားကမှ မလေးစားရင် ဘယ်နိုင်ငံကမှ ကိုယ့်နိုင်ငံကို အထင်ကြီးလေးစားမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး....သူများတွေ လုပ်ပြီးသား ရှယ်ပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့...ထပ်ရှယ်ပါတယ်....
လုပ်နည်းလေးကတော့ Definitely ကိုနှိပ်ပြီး Submit လုပ်ရုံပါဘဲ.....
Posted by Yin Sue at 2:44 AM2comments
Yin Sue | 6:20 AM | Poems
အလွမ်းသီချင်းတွေနဲ့ အဖော်လုပ်ရတာ မုန်းတယ်.....
ကဗျာတွေကို ခုတုံးလုပ်ရတာ မုန်းတယ်.....
မင်းဖျော်ပေးနေကျ ကော်ဖီလေး ဖျော်သောက်မိနေတတ်တာ မုန်းတယ်.....
Posted by Yin Sue at 6:20 AM 13 comments
Yin Sue | 6:57 AM | Photo Lovers
Posted by Yin Sue at 6:57 AM4comments
Yin Sue | 4:06 AM | Photo Lovers
Posted by Yin Sue at 4:06 AM3comments